Reer Galbeedku Cadawnimadii Musliminta May U jeedin China. | Hangool News
Reer Galbeedku Cadawnimadii Musliminta May U jeedin China.
May 1, 2020 - Written by Hangool News 1
Reer Galbeedku Cadawnimadii Musliminta May U jeedin China.Sida muuqata markasta qolada wadamada Galbeedku waxay u baahan yihiin cadaw ay tilmaansadaan. Soo jireenka taariikhduna wuxu ina siinayaa in marwalba dagaal ka dhexeeyay muslimiinta illaa markii ay samaysantay dawladdii Madiina ee uu hoggaaminayey Nabi Mohamed CS.Markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee aduunku, caalamkii islaamkuna uu dhamaan gacanta ugu jiray gumaysiga reer galbeed waxa aduunku u qaybsamay laba meelood oo iskasoo horjeeda. Dhinaca Bari oo uu hogaaminayo USSR iyo Galbeed oo uu hogaaminayey USA, laakiin dagaalkaas oo looyaqaaney
Dagaalka-Qabow wuxu dhamaaday 1991 markii uu jabay gidaarkii Barlin iyo burburkii USSR. 1992, Qoraaga Maraykanka ah ee layiraaho Samuel Huntington wuxu qoray book looyaqaan The Clash of Civilizations and Reshaping the World Order, wuxu ku sharxayaa in dagaalada aduunkakadhicidoonaa aanay noqonaynin kuwo u dhaxeeya wadamo laakiin ay noqonayaan qaar u dhaxeeya dhaqanada kala duwan ee aduunka kajirta Meelaha lagu daraaseeyo siyaasadda aduunka ee qolyaha reer galbeedku waxay diirada saareen khatar kaga iman karta caalamka islaamka oo halis gelin kara xaddaarada ay gadhwadeenka kayihiin. Waxayna bilaabeen in ay fekerkaas xooiyaan dagaalkeedana u diyaar garoobaan. Arinkaas wuxu sii xoogaystay markii ay dhacday 11 Sep 2001 , waxayna dagaal ku qaadeen wadanka Ciraq iyo wixii ay ubixiyeen Xagjirka islamiga ah. Waxaana dagaalkaa gadhwadeen ka ahaa madaxwaynihii Maraykanka W. Bush iyo Raysalwasaarihii Ingiriiska Tony Blair. Muddadaas kadanbaysay burburkii Soviet-ka illaa Covid 19 kahor
waxa si joogta ah u socday dagaalka lagu hayo wadamada islaamka ah iyo abuurista karaahiyada looqabo dadka muslimka ah.Haddaba markii ay iminka dhacayd mushkiladda xanuunka Corona Virus waxa markaliya soobaxay cadaawad cusub oo kujeedda wadanka China iyo khatarta ka iman karta. Waxaynu arkaynaa qorayaashii reer galbeedka uoo kutalax tegaya khatarta kasoo socota china, qaarkamid ah jaraa’idka afka dheer ee kasoo baxa UK sida The Sun iyo Daily Mail waxay utafaxayteen dagaalka china. Waxayna u sawirayaan in ay china tahay cadawga ugu wayn ee wadamada galbeedkuleeyihiin.
Madaxwayne Trump wuxu si cad dhowr jeer u sheegay in china ka mas’uul tahay dhibta xanuunkani keenay ee aduunka gaadhay, waxa sidaas ku raacay dhowr wadan oo yurub kamid ah sida France iyoGermany.
Sir John Sawers oo hire u ahaa madaxa sirdoonka UK (M16) wuxu si wayn u ayiday go’aankii Trump ee ahaa in uu WHO kajoojiyey kaalmayntii uga iman jirtay USA. Caadiyanna dadka reer ingiriis wixii kasoobaxa madaxda sirdoonka waxay u yaqaanaan waxa dawladdu wadatoDominic Rap oo ah wasiirka arimaha debedda ee UK wuxu si cad u sheegay in Coronaha dabadii sidii hore loola macaamilaynin wadanka China
Arimahaas iyo qaar badan oo kale waxay inatusayaan in camaradda cadaawadda ee reer galbeedkukujeesatay dhinaca China. Su’aashu waxa weeye taasina yaraynaysaa arintii hore ee kusocotay dadka iyo wadamada muslimka ah. Arimo ay kamid yihiin afar dhakhtar oo muslim ahi markii ay UK kudhinteen iyakoo dawaynayaa dadkii reer UK waxay abuurtay in ay yarayso karaahiyadii loohayey dadka muslimka ah. Taas waxa si cad umuujiyey Dhaxal sugaha boqotooyada UK, Prince Charles, markuu akhriyaye khudbadiisii uu Ramadaanka muslimiinta ku hanbalyaynay. Waxa iyana xusid mudan kaalinta sharafta leh ee dawladda Turkigu ka qaadatay ladagaalanka xanuunka ee ku saabsan kaalmooyinka ay u dirtay wadamada reergalbeedka oo ay kujirto USA.
Waxaynu sugnaabaa waa isbedelka siyaasadda aduunka kudhacaya kaas oo sabab looga dhigayo xanuunka Covid19 iyo mushkiladaha ay abuurayso dhibta dhaqaale burburka ee dhacay.
Qalinkii Hassan Osman Ismael